Kusiya Chikepe: ine chivakwa chekuvaka cheGNU Linux | Linux Vakapindwa muropa
Kusiya Chikepe: ine chivakwa chekuvaka cheGNU Linux
Mushambadzi Fireblade Software yakagadzira mutambo wevhidhiyo unonzi Kusiya Chikepe inogona kuridzwa papuratifomu yeMicrosoft Windows. Asi kana iwe waona uyu mutambo wevhidhiyo uye waida kuti uuye kuLinux, ikozvino waita. Iko kune yechinyakare inovaka yako yaunofarira GNU / Linux distro. Vashandisi veMacOS neLinux vanogona kuona rumwe ruzivo nezve ichi chivakwa kubva peji ino. Ipo iwe uchikwanisa kuwana rumwe ruzivo rwakawanda muchitoro ValvesSteam.
PaSteam iri pamutengo wakasarudzika, kunyangwe zvingangoita kuti vachapa chipo chakanaka pane imwe nguva sezvavanowanzoita. MuHumble Store ine dhisikaundi ye20%. Asi zvisinei nezvazvo, kune avo vasingazive mutambo wevhidhiyo, ndezve ngarava yakasiiwa uye matekiniki ane chekuita nezvese chaunofarira nezve yakanaka pirate bhaisikopo ... Asi zvirinani ndikusiire iyi vhidhiyo kuti ugone kuona iyo Trailer.
Sezvauri kuona muvhidhiyo, unogona kuwana akateedzana e zvinotonhorera maficha muArasa Chikepe:
Maitiro uye kurwisa zano.
Kuparara kwebhangi hakusi iko kuguma, sezvaunoona.
Kuongorora kwenyika yedigital iwe yaunowana.
Chinhu chako chega chega chinokufadza.
Kana iwe waifarira FTL, ipapo unogona "kuenda pasi" kumakungwa neiyi Abandon Chikepe. Ngarava nengarava yakatakura zvombo uye maturusi aunokwanisa kubata. Tarisana nevavengi vako vaunosangana navo munzira, vamwe vanhu nevamwe vanotyisa. Kutenda kugoverwa kwako nehunyanzvi hwakasiyana iwe hwauchazofanira kubata nenzira kwayo, semuenzaniso, havazi vese vanokwanisa kurodha zvakare makoni zvakaenzana nekukasira, saka unofanirwa kusarudza mumwe nemumwe zvakanaka pabasa rega rega ... Nezve zviwanikwa zvaunazvo, Hazvina muganho uye uchafanirwa kuzvibata nemazvo. Iyo yakazara yemahara yekushambadzira iyo yakaunza kubudirira kukuru uye iyo nguva nenguva isina kunaka kuongororwa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Kusiya Chikepe: ine chivakwa chekuvaka cheGNU Linux
Linux 5.3-rc7: Linus Torvalds inozviitazve ...
Kali Linux 2019.3 inosvika neLinux 5.2.9 uye maturusi matsva kutarisa kuchengetedzwa kwemakomputa edu